Liiska Emailka ee Adeegyada Nadaafadda iyo Nadaafadda: Maxaad Ugu Baahan Tahay Mid Iyo Sida Loo Xulo | Martech Zone
Jimce, Maarso 5, 2021 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
ESP-yada sida Mailchimp waxay hirgeliyeen sirdoon ku saabsan ciwaannada iimaylka hab lagu magacaabo Omnivorous. Iyadoo Omnivore, Mailchimp ay dirtay 50,000 kun oo digniin ah isla markaana la xiray 45,905 akoon xun oo hal sano gudaheed ah. Waxay dhiirrigelin karaan xaqiiqda ah in xisaabaadkaasi ay ahaayeen kuwo xaasidnimo ah… Waxaan ku doodi karaa in in badan oo ka mid ahi ay ahaayeen shirkado si fudud ugu diraya liisaskooda oo aan adeegsanayn dhaqannada ugu wanaagsan.
Maxaad Ugu Baahan Tahay Nadiifinta Liiska Emailka?
Nadaafadda emaylka waa tallaabo lagama maarmaan u ah helitaanka barnaamij emayl aad u weyn oo emayl ah iyo ilaalinta sumcad diraha oo wanaagsan. Halkan waxaa ah 4 xaaladood oo liiska nadiifinta emailku u yahay baahi loo qabo:
Socdaalka - Haddii aad u guureysid adeeg bixiye cusub, liistada liiska e-maylku waa tallaabo muhiim u ah adiga Istaraatiijiyada diirimaadka IP.
Meelaynta Sanduuqa Hoose - Emailadaada ayaa laga yaabaa inay si toos ah ugu socdaan galka qashinka maxaa yeelay liiskaagu wuxuu leeyahay dabinno fara badan oo spam ah iyo cinwaano emayl oo ku dul yaal.
Heerarka Furan ee Hooseeya - Haddii aadan cabireynin heerka meelaynta sanduuqaaga oo aad leedahay heerar furan oo furan, emaylladaadu waxay aadi doonaan galka qashinka sababo la xiriira dabinno badan oo spam ah iyo cinwaanno emayl oo boodboodaya.
Dib U Hawlgelinta - Haddii aad hayso liis aanad u dirin bilooyin, waxaad u baahan doontaa inaad nadiifiso liiska si aad uga fogaato kor u kaca ku yimaada kor u kaca ee saamaynta ku yeelan kara heerarkaaga wax-soo-saar.
Sida loo Xullo Adeeg Nadiifinta Liiska Emailka
Compliance - inay shirkaddu degan tahay iyo haddii kale inay ku nooshahay waddan leh xeerar u gaar ah sida GDPR ama emaylka sharciga u hoggaansamida spam.
Liistadeena Emailka Nadiifinta kafaalaqaadka:
Xaqiijinta emaylka, falanqaynta iyo nadiifinta liistada oo loogu talagalay dadka doonaya qalab deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo iyada oo aan laga helin buuq iyo jahwareer. Kaliya 3 talaabooyin fudud oo lagu hagaajinayo liiskaaga.
Dammaanad 98% + heerka gaarsiinta liiska emailkaaga la xaqiijiyay.
Ikhtiyaarrada lagu soo dejiyo liisaskaaga cusub iyo warbixinnada gaarka ah.
24 / 7 side iyadoo dadka dhabta ah dhinaca kale laga caawinayo.
Soo rar Liiska Emailkaaga
Liistada E-mayl Hogaaminta Bixiyeyaasha iyo Nadaafadda
Booncer - Ku nadiifi liisaska emailkaaga jeegeeyaha emaylka lagu kalsoon yahay. Xaqiijinta iimaylka isticmaale-saaxiibtinimo iyo liiska agabka nadiifinta waxay kaa caawinaysaa inaad ilaaliso xidhiidhka oo aad la xidhiidho qof dhab ah fudayd iyo degdeg.
Kickboxing - Kickbox wuxuu hubiyaa inaad kaliya u dirto emaylka isticmaaleyaasha dhabta ah waxayna kaa caawineysaa inaad ka soocdo cinwaanada tayada hooseeya iyo kuwa qiimaha sare leh. Ilaali sumcaddaada, kor u qaado qiimaha furan, oo lacag ku keydi Kickbox.
MailerCheck - Hubinta emaylka, falanqaynta, iyo liistada nadiifinta ee loogu talagalay dadka doonaya qalab deg deg ah oo la isku halleyn karo iyada oo aan laga helin buuq iyo jahwareer. Kaliya 3 talaabooyin fudud oo lagu hagaajinayo liiskaaga.
MarnaBounce waxay tirtiraysaa cinwaannada emaylka aan ansax ahayn waxayna si aad ah u yareysaa sicirka guud ee soo kabashada ee ugu dambeynta la gaari karo.
Xuree - Ogow inaad email u direyso xisaab aan ka soo kabsan doonin. Xverify waxay ku xaqiijin kartaa cinwaanada emaylka waqtiga-dhabta ah iyo iyadoo la adeegsanayo.
Ampliz - Ampliz waxay xaqiijineysaa cinwaanada emaylka macaamiishaada waqtiga dhabta ah waxayna kaa caawineysaa inaad ilaaliso nadaafadda emaylka ee gaarsiinaysa heerka jawaabta ugu badan. Degelkan sidoo kale wuxuu ka diiwaangashan yahay La'aanta adeeg. Bounceless wuxuu nadiifin doonaa liistada emaylkaaga adoo ogaanaya emayllada aan la xaqiijin, dabinnada spam, iyo aagagga la tuuri karo.
Xaqiijinta xogta – Si dhakhso leh u xaqiiji liiska emailkaaga. Ku xidh Mailchimp ama Xiriir joogto ah xisaabta ilaalinta joogtada ah iyo dayactirka liiska.
Calaamadeeyaha - Emailmarker wuxuu kaa caawinayaa inaad kala shaandhayso emayl tayo-hoose leh xiriirada qiimaha-sare leh. Waxaan hubinaynaa inaad emayl u dirto isticmaaleyaasha dhabta ah oo aad ilaaliso sumcaddaada, Kordhi ololahaaga emaylka, iyo inaad lacag ku keydiso Emailmarker.
Hippo - Adeegga khadka tooska ah ee adeegsiga ee macaamiisha iyo macaamiishooda
Kormeeraha iimaylka - Nadiifi oo ka saar cinwaanada emailka aan ansax ahayn liisaska suuqgeyntaada
Tags: Act-OnOlole firfircoonJilid firfircoonaeroleadsAgile-CrmAiva-LabsamplizautopilotAWeberBombbombka soo kabtaanbilaa bilaaBriteVerifyBrontoKormeerka Ololahakabtan cadeeSuuqaliis nadiif ahnadiifi liiskaXariifnimoClickFunnelsFoomamka Cognito-gaXiriir joogto ahxiriir ahaanConvertKitDaawadayxaqiijinta xogtaXaqiijinta xogtaSkov-samatabbixinCinwaanka emaylka la tuuroOgaanshaha cinwaanka emailka la tuuri karofaleeboeHygienicscinwaanka emailkanadaafadda cinwaanka emailkajawaabaha emaylkahubiyaha emaylkaemail nadiifinta apigaarsiinta emaylkaiimayl ku soo dirnadaafadda emaylkaliiska email xaqiijiansaxinta emaylkaemail ansax ahxaqiijinta emaylkaxaqiijinta emaylka apisoo dir emailemailhippogaar ahaantijaaboFoomkaFoomCinwaan cusubFulcrumGDPRGacanta ku hayntaFoomamka GoogleSarehubsashohubucoiContactLa xiriir-Proaragti ahaanmeelaynta sanduuqaSi macquul ahSaabuuntaintercomispJotFormemaylka qashinka ahshaandhaynta emaylka qashinka ahsanduuqKickofflabsklemailnadiifinta liiskanadiifinta liiskaqor nadaafaddawarqad-hubiyemailchimpMailerliteboostoBoostadasuuqoMoosendNocrimiowarqadPowrcadeyncadeyn.ioqasQualimankaxaqiijinta emaylka deg deg ahBaaritaan degdeg ahGudbinta-RockRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321RFC 5322 RFC 2821RFC 6531cafiska iibkasumcadda dirahasendgridSoo dirSendxfiiqanFarsamaynta fariimahaSahaminta casriga ahQiiqspamdabinka spamcinwaanada emaylka spamSparkPostyaasiinSahan-Meelkastacinwaanada emaylka ee ku meel gaarka ahbaarahaTowerdatarunmailnoocaaan la furinansax liisaska emaylkaxaqiijinhubi emaylkajawaab toosanjawaab celinaragti6WooboxwufoocaddaynzapierzendeskZoho CRMFoomamka Zoho